न सुन्छ, न देख्छ तर पनि सधै लाइन लागेर किन र कसरी हिड्छ कमिला ? रोचक कारण यस्तो रहेछ – ताजा समाचार
न सुन्छ, न देख्छ तर पनि सधै लाइन लागेर किन र कसरी हिड्छ कमिला ? रोचक कारण यस्तो रहेछ
काठमाडौँ, २३ साउन । हामीले प्राय देख्ने गरेका छौ कि कमिला जहाँ जहिल्यै पनि लाइन लागेर हिडेका हुन्छन् । हामीलाई खुल्दुली लाग्न सक्छ कमिला जहिल्यै पनि किन लाइन लागेरै हिड्छन् ? यसको खास कारण अत्यन्तै रोचक रहेको छ ।
मानिसहरुको जस्तो श्वासप्रश्वास गर्नको लागी कमिलाको फोक्सो हुदैन् । तर अक्सिजन र कार्बनडाईअक्साइडको आवागमनले गर्दा कमिलाको शरीरमा स- साना छिद्र रहेको हुन्छ ।
अनि कमिलाको सुन्नको लागी कान र देख्नको लागी आखाँ पनि हुदैन । जब खानाको लागी रानी कमिला बाहिर निस्कन्छ, त्यसबेला रानी कमिलाले बाटोमा फेरोमोन्स नामको रसायन छोडेर जान्छ । सोही सुगन्धको कारणले सुग्दै अरु कमिला पनि पछि पछि लाग्छन् । यसै क्रममा विस्तारै लाइन बनेको हो ।